Apple weputara OS X 10.11.4 Public Beta | Esi m mac
Apple wepụtara OS X 1 Public Beta 10.11.4 maka Betatesters
Na Jenụwarị 11, Apple malitere ụdị beta mbụ nke OS X El Capitan 10.11.4 maka ndị mmepe yana akụkụ nke nsụgharị nke iOS, tvOS na ndị ọzọ. Ugbu a, ọ bụ oge nke ndị ọrụ na-emikpu onwe ha na mmemme beta ọha. Cupmụ Cupertino na-emechi mkpụrụ ahụ ma anyị nwere mbipute ọha na eze n'ime mmemme beta, Mmemme ngwanrọ Beta.
Maka ugbu a, ihe anyị nwere ike ịchọta na ụdị ọhụụ ahụ amatagogo maka mwepụta nke ụdị ahụ beta maka ndị mmepe, pụta ìhè ahụkarị usoro kwụsie ike na arụmọrụ ndozi, ndakọrịta a ọhụrụ version nke Ntaneti di maka ngwa ngwa.
Ntọhapụ a gosipụtara na ụdị beta ahụ "enweghị nsogbu" n'ihe gbasara ọrụ yana ojiji, yabụ a na-ezigara ya ndị ọrụ edebanyere na mmemme beta ma mebie usoro ahụ na iziga nzaghachi na Apple. Dị ka anyị na-akwado na-eme nkwado ndabere nke Mac gị, nke a dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu tupu ị wụnye ụdị ọ bụla na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ bụ beta. Ihe kachasị mma n'okwu ndị a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite onwe gị iji nwaa, bụ iji wụnye site na ncha na ngalaba ọhụrụ ma ghara ime beta version a siri ike version dị ka isi OS gị Mac n'agbanyeghị na ọ nwere ike na-arụ ọrụ zuru okè.
Can nwere ike ịnweta ụdị ọhụrụ beta mbụ nke OS X 10.11.4 na weebụsaịtị nke Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » OS X El Capitan » Apple wepụtara OS X 1 Public Beta 10.11.4 maka Betatesters
Otu esi emepụta otutu aha maka otutu akaụntụ Mail
Ihe nkiri Steve Jobs na-anata aha 2 Oscars